युगसम्बाद साप्ताहिक - समस्या के हो र कहाँ हो ?
Sunday, 05.31.2020, 12:00am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 09.29.2015, 12:00pm (GMT+5.5)
विश्वलाई आश्चर्यचकित पार्ने राजनीतिक घटनाक्रम नेपालमा हुने गरेको छ । दश वर्षको सशस्त्र जनयुद्ध आफ्नै किसिमले शान्तिमा रुपान्तरण भयो । विश्वका शक्ति मुलकहरूले यसमा खेल्न खोजे, आआफ्ना स्वार्थ लाद्न खोजे अनि प्रभाव विस्तार गर्ने दाउपेच पनि रचे । उनीहरू यसमा धेरै सफल भए, थोरै असफल भए । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीयता जस्ता विषय उचालिदिन उनीहरू सफल भए । यसको विष अहिले फैलन थालेको छ । पछिल्लो समय प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले यसको भेउ पाए, तर ढिलो भैसक्यो । यतिबेला मुलुक तिनै विदेशी पिलाइदिएको विष पिइरहेको छ । मुलुक विदेशी शक्ति प्रभाव विस्तारको आकाक्षाले आक्रान्त छ । उसले चाहेको हुने सम्भावना अहिलेको गतिविधिले नदेखिएपछि ऊ कडा रुपमा प्रस्तुत भैरहेको छ, नेपाल नाकाबन्दीमा छ ।
नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलन वा परिवर्तनमा विदेशी शक्ति, विशेषतः भारतका निर्णायक भूमिका रहँदै आयो । १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त पार्न अनि राजाको हातबाट दलहरूको हातमा सत्ता फिर्ता गर्न भारतले नै गठजोड गरिदियो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात संसदवादी दलहरूबीच भारतकै मध्यस्थतामा भारतीय भूमिमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको फल अहिले नेपालले पाइरहेको छ । त्यो सम्झौता गराइदिएको ब्याज भारतले खोजेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले विगतमा प्रदर्शन गरेको भारत परस्त चरित्र नै अहिलेको समस्याको कारण हो । भारतले नेपालमा हामीले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने मान्यतामा थिए तर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नै ढंगले द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरे । आफ्नै किसिमको संविधान जारी गरे । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अन्त्य नेपाली पारामा भयो ।
विश्व लोकतान्त्रिक अभ्यासमै नयाँ इतिहास रच्दै ८५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले साथ दिएको संविधान जारी भयो । यो एउटा अभूतपूर्व अवसर थियो । तर संविधान जारी भएपछि नेपालमाथि जेजस्तो टिप्पणी र प्रतिक्रिया अनि साथ र सहयोगको प्रतिबद्धता हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । नेपालको निकटतम् छिमेकी मुलुक भारतले न संविधानको स्वागत गरेन । भारतले आफ्ना सुझावहरू संविधानमा नसमेटिएको भन्दै दवाव सिर्जना गरिरहेको छ । नाकाबन्दीको अवस्था नेपालले भोगिरहेको छ ।
भारतको शासनले जेजस्तो व्यवहार देखाइरहेको छ त्यसको आलोचना भारतका बौद्धिक क्षेत्रले गरिरहेको छ । नेपालले जसरी जुन स्तरको संविधान बनायो त्यसबाट भारतले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण उनीहरूको छ । तर, नेपालमै संविधानप्रति मधेशवादी दलका नेताहरूको बिरोध छ र उनीहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको अधिकांश पूरा भैसकेको संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहेका दलहरूले बताए पनि मधेशी जनतालाई सडकमा उतार्न छोडिएको छैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसामा परिणत भएको छ । भारतले मधेशवादीप्रति सहानुभूति देखाउँदै वक्तव्यमाथि वक्तव्य जारी गर्दै गएपछि परिस्थितिले अर्कै मोड लिनथालेको आम अनुभूति छ ।
संविधान कहीं पनि शतप्रतिशत हुँदैन । बिरोध गर्ने र अहिमसत जनाउनेहरू हुन्छन्, तर त्यसको समाधान के त ? आन्दोलन र हिंसाले नै सबैकुरा पूरा हुन्थ्यो भने माओवादीले उहिल्यै उनीहरूले भनेजस्तो सत्ता स्थापना गरिसक्थ्यो । त्यत्रो वर्ष लडेर, त्यत्रा मान्छे मारेर ऊ किन शान्ति प्रक्रियामा आयो र अहिले के के पायो ? अहम् र विश्लेषणीय विषय छ । अहिलेको संविधानलाई भौगोलिक हिसावबाट कित्ताकाट गर्ने प्रयास समेत भैरहेको छ । यो पहाडीको संविधान हो, मधेशीको पक्षमा छैन भन्नेजस्ता साम्प्रदायिक नारा घन्काएर मुलुकमा विग्रहको स्थिति सिर्जना गर्ने गरिएको छ । संविधान शून्य उपलब्धिको पक्कै छैन । तर, यसमा पहिले लगाइएका नाराहरू समावेश गरिएन । किनभने राजनीतिक नारा र संविधान फरक कुरा हो । हरेक कुरा संविधानमा लेखेर साध्य पनि हुँदैन । तर, अहिले असन्तुष्टिको नाममा जेजस्तो हर्कत भैरहेको छ त्यसले मुलुकको सुदूरभविष्यसम्म गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ ।
यो संविधान नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो । यसमा विदेशीले थोपरेको एजेण्डा राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्न नसक्ने संविधानको कुनै अर्थ रहँदैन । जेजस्ता विषयहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने आवाज देशभित्र र बाहिरबाट आएको छ त्यसले मुलुकको हित कति गर्छ गम्भीर विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक छ । तत्कालको अप्ठ्यारो सल्टाउनका लागि गरिने सहमति र सम्झौताले कस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने त अहिले नै देखिएको छ । मधेशवादीले उतिबेला भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । त्यो उनीहरूको अधिकार हो । हिजो दिन्छु भनेर आज नदिंदा उत्तेजनामा आउनु स्वाभाविक हो ।
मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ । आन्दोलनमा रहेका बाहेक सबै एक ठाउँमा उभिएका छन् । अब आन्दोलनरत क्षेत्रका जनतामा संविधानका बारेमा जानकारी दिन ढिला गर्नु हुँदैन । समस्या के हो ? चाहिएको के हो र संविधानले के के दिएको छ ? त्यसको यथार्थ जानकारी जनताको घरघरमा पुर्याइनु पर्दछ । विभिन्न भाषामा संविधान छापेर जनतालाई दिनु पर्दछ । अनि यथार्थ कुरा सबै छर्लङ्ग हुनेछ । अब कोठे बैठकको भरमा समस्या समाधान हुँदैन, मधेशवादी नेताहरूसंग गरिन सहमति र सम्झौताले पनि समस्या समाधान पनि हुँदैन । सडकमा जनतालाई जे भनेर ल्याइएको छ उनीहरूलाई चित्त बुझाउने गरी संविधानको पक्षधरहरूले कदम चाल्नुपर्छ । होइन भने मुलुक विस्तारै गृहयुद्धको चपेटामा जाक्किन सक्छ ।